Bit By Bit - Ethics - 6.4.1 Kuremekedza Persons
Kuremekedza Persons riri pamusoro pokurapa vanhu sezvo zvionera uye tichikudza zvido zvavo.
Bhuku reBelmont rinotaura kuti mutemo wekuremekedza vanhu kune zvikamu zviviri zvakasiyana: (1) vanhu vanofanirwa kutarisirwa sevane simba uye (2) vanhu vane rusununguko rwakaderera vanofanira kuva nekodzero yekuchengetedzwa kwakawedzerwa. Kuzvidzivirira kunofananidzwa nekurega vanhu kutonga hupenyu hwavo pachavo. Mune mamwe mazwi, Kuremekedza Vanhu kunoratidza kuti vatsvakurudzi havafaniri kuita zvinhu kune vanhu vasina kubvumirwa. Zvinonzwisisika, izvi zvinotsigira kunyange kana muongorori achifunga kuti chinhu chiri kuitika hachina matambudziko, kana kuti kunyange anobatsira. Kuremekedza Vanhu kunotungamirira kune pfungwa yokuti vatori-kwete vatsvakurudzi-vanogona kusarudza.
Mukuita, chirevo chekuremekedza vanhu chakashandurwa kureva kuti vanotsvakurudza vanofanira, kana zvichibvira, vawane rubatsiro rwakavanzika kubva kune vatori vechikamu. Pfungwa inokosha nekubvumirana kwakanyatsozivikanwa ndeyokuti vatori vechikamu vanofanira kuendeswa nemashoko akakodzera mumutauro unonzwisisika uye zvino vanofanira kuzvipira kubvuma kutora chikamu. Rimwe nerimwe remashoko aya ndiro rave riri nyaya yehurukuro yakawedzerwa yepamusoro uye nyanzvi (Manson and O'Neill 2007) , uye ini ndichapa chikamu 6.6.1 kuti ndibvumirwe.
Kushandisa nheyo yekuremekedza vanhu kune mienzaniso mitatu kubva pakutanga kwechitsauko inotarisa nzvimbo dzinofunganya nemumwe wavo. Munyaya imwe neimwe, vatsvakurudzi vakaita zvinhu kuvadzidzi-vakashandisa deta yavo (Tastes, Ties, kana Nguva), vakashandisa kombiyuta yavo kuita basa rekuyera (Encore), kana kuti vakanyoresa mukuedza (Emotional Contagion) -kusina kubvumirana kana kuziva . Kuvhiringidzwa kweshoko rekuremekedza vanhu hakuiti kuti zvidzidzo izvi zvigadziriswe; Kuremekedza Vanhu nderimwe remitemo mina. Asi kufunga nezvekuremekedza vanhu kunoratidza dzimwe nzira iyo zvidzidzo zvingagadziridzwa maitiro. Semuenzaniso, vatsvakurudzi vangave vakawana rumwe rubvumo rwevatori vechikamu vasati vadzidza kutanga kana kana vapedza; Ndichadzoka pane izvi zvingasarudzwa pandinokurukura kubvumirwa kwevhangeri muchikamu 6.6.1.